ကလေးအရွယ်မှာ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝဖို့ အရေးကြီးပါတယ် - Hello Sayarwon
Appendicitis (အူအတက်ရောင်ခြင်း )
Bloating (ဗိုက်တင်းခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေသိထားဖို့လိုသလဲ)
တရုတ်နံနံကြီး နှင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ရှိသင့်တဲ့ ပျမ်းမျှနှလုံးခုန်နှုန်း တွက်ချက်ခြင်း (Target Heart Rate Calculator)
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ကြောင့် ဘယ်လောက်ကုန်ကျနေသလဲ (Smoking Cost Calculator)
ကလေးရဲ့ဝမ်း က ပုံမှန်ဘယ်လိုအနေအထားဖြစ်နေသင့်တာလဲ
ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှု ပမာဏတွက်ချက်ခြင်း(Calorie Burn Rate)
ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်း အချိန်ဇယား (Vaccination Tool)
ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်
ကလေးအရွယ်မှာ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win | ရေးသားသူ Ye Myo Myat
Update Date စက်တင်ဘာ 21, 2020 .2mins read
ညစဉ် အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှုဆိုတာ အသက်အရွယ်မရွေး လွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်၊ ကျောင်းစာတွေအပြင် တခြားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာအခက်အခဲတွေကြောင့် အိပ်ချိန်မမှန်ကြပါဘူး။ အိပ်ချိန်မမှန်တာကို သိပ်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ လူတွေ ထင်ကြပေမယ့် တကယ်ကတော့ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။
အိပ်ချိန်ပြည့်ဝတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ နေ့စဉ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အားအင်တွေ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး လူကို တက်ကြွလန်းဆန်းနေစေတယ်။ စိတ် နဲ့ ခန္ဓာကိုလည်း ကျန်းမာစေတယ်။ နေ့စဉ် လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ ပိုပြီး အာရုံစူးစိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။
ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေဆဲ အရွယ်ဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် နေ့စဉ်အိပ်ချိန်ပြည့်ဝဖို့ ပိုပြီးတောင် လိုအပ်ပါသေးတယ်။ လူကြီးအရွယ်မှာ တစ်နေ့ အနည်းဆုံး အိပ်ချိန် ၇နာရီ ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပြီး ကလေးတွေဆိုရင် ဒီထက် အိပ်ချိန်ပိုများတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ကလေးက အိမ်စာတွေ ပိနေလို့၊ စာတွေ ကျက်နေရလို့ ညဘက်အိပ်ချိန်တွေပါ ထိခိုက်လာတာ တွေ့ရပြီဆိုရင် မိဘတွေအနေနဲ့ ဒီအပြုအမူကို အမြန်ဆုံးတားဆီးပေးပြီး ကလေးတွေကို အိပ်ရာဝင်ခိုင်းလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ကလေးတွေကို ဘာလို့ စောစောအိပ်ရာဝင်ခိုင်းသင့်လဲ၊ အိပ်ချိန်မှန်တဲ့ ကလေးတွေမှာ ကျန်းမာရေးအရ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁။ အိပ်တယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားပေးလိုက်တာပါပဲ။
အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အားအင်တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးတယ်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေတယ်။ ကိုယ်တွင်းဆဲလ်တွေကို အသစ်ပြန်လည် မွေးဖွားလိုက်သလိုပါပဲ။ ကလေးတွေ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ကျောင်းစာရော အားကစားမှာပါ ပိုပြီး အာရုံစူးစိုက်လာနိုင်သလို လန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဦးနှောက်ကိုလည်း အနားပေးနိုင်ပါတယ်။
နိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ဦးနှောက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စဉ်းစားစရာ အတွေးတွေ၊ မေးခွန်းတွေ၊ ပြဿနာတွေကို အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာ ခေတ္တခဏ မေ့ပျောက်သွားစေပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဦးနှောက်အတွက်လည်း အလုပ်လုပ်ရသက်သာပြီး အနားရနိုင်ပါတယ်။
၃။ စိတ်ခံစားချက်ကို ကောင်းမွန်စေတယ်။
အိပ်ချိန်နဲ့ စိတ်ခံစားချက်ဟာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ မောပန်းနွမ်းနယ်သမျှကို အိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပြေလျော့သွားစေနိုင်တဲ့အတွက် နိုးလာတဲ့အခါ လူသစ်၊ စိတ်သစ်နဲ့ အရာရာအတွက် စိတ်ထဲမှာ အကောင်းမြင်စိတ်၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ပိုပြီး ဖြစ်လာမှာပါ။
၄။ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှုဟာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
အိပ်နေတဲ့အခါ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့၊ ကိုယ်ခန္ဓာကြွက်သားတွေ ကြီးထွားလာစေဖို့ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း နှေးတယ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ တစ်နေ့တာ အိပ်ချိန်နဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြန်လည်လေ့လာသင့်ပါပြီ။
၅။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးတယ်။
အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့အခါ၊ အိပ်ရေးမဝတဲ့ကလေးတွေမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းမယ်။ ဒီအခါ ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ဝင်လာမယ့် ရောဂါတွေကို မတားဆီးနိုင်တော့ဘူး။ ပိုပြီး ဖျားနာလာမယ်။ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
၆။ စိတ်ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်။
စိတ်ခံစားချက်နဲ့သာမက အထီးကျန်ဝေဒနာ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ပူပန်လွန်ရောဂါ အစရှိတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ကလေးအရွယ်မှာ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှုဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အိပ်ချိန်မှန်မှ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်တယ်။
အိပ်စက်အနားယူခြင်းဆိုတာ နေ့စဉ် လူသားတိုင်း မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝတဲ့အခါ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသာမက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးလို့ ကျန်းမာစေတယ်။ ရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ အိပ်ရေးမဝတဲ့ကလေးတွေ ကြီးလာတဲ့အခါ အဝလွန်တာ၊ နှလုံး၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုးရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေပါတယ်။
၈။ စာကောင်းစွာ လိုက်နိုင်စေပါတယ်။
အိပ်ချိန်မှန်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ဦးနှောက်နဲ့ ဉာဏ်ရည် ထက်မြက်စေတဲ့အပြင် ကျောင်းစာတွေမှာ ပိုပြီး အာရုံစူးစိုက်လာနိုင်တာ၊ သင်လွယ်၊ တတ်လွယ်၊ နားလည်လွယ်တာ၊ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း မြင့်လာပြီး မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။
၉။ အိပ်ချိန်ပြည့်မှ အားရှိမှာပါ။
ကလေးတွေ တစ်နေကုန် စာကျက်၊ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေရလို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီဆိုရင် စောစော အိပ်ရာဝင်ခိုင်းလိုက်ပါ။ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှသာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အားအင်တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးလို့ ကလေးတွေလည်း ကျန်းမာလန်းဆန်းပြီး တက်ကြွနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား။
အကယ်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အခုထက်ပိုပြီး သိရှိရမယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
အဆင်မပြမှုတစ်စုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းဖို့မလိုပါဘူး။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် အကြံပြုချက်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်တွေက ဗဟုသုတရပါတယ်။ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု ဌာနတွေ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပါ။
ဒါကို ဘယ်လိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မလဲ။
ယခု ဆောင်းပါးတွင် မှားယွင်းသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်နေသည်။
ယခုဆောင်းပါးသည် လုံလောက်ပြည့်ဝသည့် သတင်းအချက်အလက်မပေးနိုင်ပါ။
Why Children Need Enough Sleep -https://valleysleepcenter.com/10-reasons-kids-need-sleep/ (Jan 17, 2019)
Kids Health And Getting Enough Sleep -https://www.webmd.com/parenting/raising-fit-kids/recharge/features/brain-without-sleep#1 (Jan 17, 2019)
ညဘက်မှာ အိပ်မပျော်တဲ့ ပြဿနာကို အဖြေရှာကြမယ်
မနက်အိပ်ရာထ မလုပ်သင့်တဲ့ အမှား (၉) ခု
ကလေးကျန်းမာရေး ဆိုတာက ကလေးတစ်ယောက် သန္ဓေတည်တဲ့ အချိန်ကနေစပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာသည်အထိ မိဘတွေဘက်က ဂရုစိုက် စောင့်ကြည့်ပေးရမယ့် အရာပါ။
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Phyo Wai Lynn
ရေးသားသူ Aye Thi Mon
ကလေးကျန်းမာရေး, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 3, 2021 .3mins read
ဘေဘီလေးက ကြက်သွန်နီ (Onions) စားလို့ရရဲ့လား
ဘေဘီလေးက ကြက်သွန်နီ (onions) စားလို့ရရဲ့လား။ ဘယ်အရွယ်မှာ စစားလို့ ရတာလဲ။ ဒီမေးခွန်းက မေမေတိုင်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ရပ်ပေါ့။
ကလေးငယ် ဇန်နဝါရီ 20, 2021 .2mins read
သီချင်းနားထောင်ရင်ရမယ့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အကျိုးကျေးဇူးများ
တေးသီချင်းတွေ၊ ဂီတ သံစဉ်တွေကို နေ့စဉ် နားသောတဆင်တဲ့အခါ ထူးခြားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုမှုတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ye Zon Aung
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ ဒီဇင်ဘာ 31, 2020 .2mins read
စိတ်ကျန်းမာအောင် ဗီဒီယိုဂိမ်း ကစားပေးရမယ်တဲ့
Oxford က နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာအရဆိုရင် ဗီဒီယိုဂိမ်း ဆော့ကစားတာဟာ စိတ်ပျော်ရွှင်စေပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးကို အကြီးအကျယ် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး ဒီဇင်ဘာ 31, 2020 .2mins read
ချစ်မဝတဲ့လိင်မှုဘဝ မျိုး ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2021 .2mins read
သင် အိပ်ရေးဝတယ် ဆိုတာ သေချာလို့လား
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 8, 2021 .2mins read
ဆိုရှယ်မီဒီယာ သုံးရတာ ပင်ပန်းလာရင် Digital Detox လုပ်ကြည့်စမ်းပါလား
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 8, 2021 .3mins read
သူများအဆင်ပြေနေရင် ကိုယ်စိတ်မချမ်းသာတဲ့ FOMO စိတ်ကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ